Kursiga Xafiiska Jumladda Model P005 Soo-saare iyo Alaab-qeybiye |Laba-qarxin
Midabka:Madow + Buluugga / Madow + Cas
Cabirka Shayga LxWxH:22 x 23 x 50 inji
Naqshadaynta ERGONOMIC: Kursiga xafiiska oo loogu talagalay dhismo ergonomic ah.Kursigayaga ciyaaraha wuxuu leeyahay barkin madaxeed oo la guuri karo iyo barkin lumbar ayaa kuu siinaya taageero buuxda qoorta iyo dhexda markaad ku nasato.Waxa kale oo ay leedahay boosas quful oo kala duwan.
SHAQO BADAN: Dhererka la isku hagaajin karo, xagasha dambe iyo habka qufulka si loo xiro dhabarka xagal kasta ilaa 135°;cududaha ballaaran waa la hagaajin karaa.Kursiga fulinta wuxuu ku qalabaysan yahay taageero lumbar oo si xor ah loo hagaajin karo iyo barkin madaxeed si loo ilaaliyo laf dhabarta iyo qoorta.
AALAD TAYO SARE AH: Maqaar PU ah oo siman, barkin kursi oo lagu daray, iyo kursiga lumbar iyo barkimooyinka madaxa la saaro waxay bixiyaan taageero iyo raaxaysi dheeraad ah.Saldhig hawl culus iyo naylon rogrogis siman si loo helo xasillooni iyo dhaqdhaqaaq weyn.
GOLAHA FUDUD: Kursiga ciyaarta aad bay u fududahay in la isku geeyo.Qaab dhismeedka kursi xafiiskeena waa mid aad u fudud. Kaliya raac tilmaamaha oo bilow inaad ku raaxaysato kursigaaga cusub in ka yar 15 daqiiqo Kursigayagu wuxuu diyaar u yahay inuu isu keeno, isagoo wata dhammaan qalabka iyo qalabka lagama maarmaanka ah.
CODSIGA BALAADHAN: Kursiga xafiiska tartanka waa kursi ku habboon doorashada shaqada, waxbarashada iyo ciyaaraha.Waxay ka dhigi doontaa booskaaga mid casri ah oo qurux badan, wuxuuna kaa dhigi doonaa mid raaxo leh.
AALAD TAYO SARE AH
Maqaar PU ah oo siman, barkin kursi oo lagu daray, iyo kursiga lumbar iyo barkimooyinka madaxa la saaro waxay bixiyaan taageero iyo raaxaysi dheeraad ah.
LABAAD KURSIGA CIYAARAHA
Kursiga ciyaaraha OLENY YTWOBLOW
90 ~ 135° Kursiga
Hore: Qaabka Kursiga Dhaqaalaha 1709-O
Xiga: R qaabka lugaha aluminium miiska ciyaaraha model FM-JX-R
Kursiga Ciyaarta ee labanlaaban
Guddoomiyaha Ciyaaraha Elite
Gudoomiyaha Ciyaaraha Nitro
Guddoomiyaha Ciyaaraha Ohaho
Kuraasta Ciyaaraha ee Sareeya
Guddoomiyaha Ciyaaraha Vortex
Qaabka Kursiga Dhaqaalaha 1709-O